Ikhaya losapho lwasePokhara - I-Airbnb
Ikhaya losapho lwasePokhara
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguEkraj
Simi kwimizuzu eli-10 yokuhamba umgama ukusuka kwindawo yokhenketho echibini kunye ne-100m ngaphakathi kwesitrato esikhulu. Induli encinci kunye nenhle yokunyuka emva kwefulethi. Le ndawo yamkelwa njengenye yeendawo ezivumelanayo nezizolileyo zesixeko sasePokhara. Ngokufanayo siyazihlonipha iinkcubeko zasentshona njengoko sisaziwa ngayo, sineshishini kwicandelo lokwamkela iindwendwe.
Igumbi lokuhlala elifakwe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlala
- ikhitshi eyahlukileyo kunye nokutya
- 375sq.ft yendlu epheleleyo yendawo
- 5.5sq.ft lokuhlambela
- 4 nge 10 ft balcony enembono yeenduli eziluhlaza
- indawo eyaneleyo eqhelekileyo
- Iifestile ezinkulu ezi-4 ezijonge emazantsi, entshona, nangasentla
Le yindawo efanelekileyo yokuhlala. Uninzi lwabantu basekuhlaleni bahlala apha. Unokubona umsebenzi wasekuhlaleni kunye nenkcubeko yaseNepali. Abantu baseNepali bavuleleke kakhulu. Bahlala bemomotheka, benobubele kwaye bemsulwa, oya kuphawula ngexesha lokuhlala kwakho. Le ndawo sele idume ngokurenta iiflethi. Uya kubona nabantu basemzini. Ayikude kwihabhu yabakhenkethi kunye nemarike yendawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Ekraj
Siphantse ngalo lonke ixesha ekhoyo kuyo nayiphi na imibuzo kunye neengxaki ukuba iindwendwe zethu zinokuba nazo kwaye siyakwamkela undwendwe lwethu kwimibhiyozo yethu ukuba banomdla.